Alexander Sea View Apartment, Pool, Kufuphi noLwandle - I-Airbnb
Alexander Sea View Apartment, Pool, Kufuphi noLwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguTony
Indawo entle yangoku kwaye ixhotyiswe ngokupheleleyo kwigumbi lokulala eli-1 kwindawo ephezulu yeLimassol. Le ndawo inethafa enkulu ene-awning enika iimbono ezintle zolwandle kunye nedama lokuqubha elidityanelweyo elineegadi eziluhlaza.
ILimassol eyona iflegi eblue enesanti iilwandle zihamba nje imizuzu emi-5 kunye neebhari zaselwandle, iSt. Raphael Marina kunye ne-5 star resorts.
Iivenkile eziluncedo, iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela zamazwe ngamazwe kunye nokutya okukhawulezayo, ikhemesti kunye nerenti yeemoto nazo zonke zikufuphi.
I-Alexander Sea View Apartment iyindawo ebanzi ye-1 BR, i-60 sqm indawo enkulu yokuhlala ilungele abantu abadala be-4 kunye nebhedi ephindwe kabini kunye nenye i-sofa ibhedi ephindwe kabini.
Ezinye zeempawu zepropathi:
• Ithafa elikhulu labucala elijonge ulwandle kunye nezitiya zabantu bonke, ezineendawo zokuhlala elangeni kunye netafile yokutyela yabantu aba-6.
• Iqula lokuqubha kwindawo
• I-A/C – i-Air Conditioning kulo lonke
• I-Smart TV (i-NETFLIX ifakiwe)
• Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo
• Umatshini wekofu we-NESSPRESO®
• Indawo yokupaka simahla kwizakhiwo
• Ibhedi enkulu ye-Queen (160 X 200)
• Ibhedi ephindwe kabini yesofa (144 X 200
4.76 · Izimvo eziyi-49
Indawo yabakhenkethi yaseParekklesia/Pyrgos yenye yezona ndawo zikhethekileyo zokuhlala zaseLimassol, idolophu yesibini ngobukhulu kwesi siqithi. I-Limassol Marina, i-Molos promenade kunye nedolophu endala zijikeleze i-15 km kude. Indawo yokumisa ibhasi yimizuzu emi-5 ngeenyawo, ibonelela ngoqhagamshelo oluthe ngqo kwindawo yabakhenkethi yaseLimassol kunye nedolophu endala, kunye nesikhululo seenqwelomoya saseLarnaca.
Indawo yaseParekklesia/Pyrgos yaziwa njengelona lwandle lubalaseleyo edolophini, enesanti egqwesileyo kunye namanzi angekho nzulu nazolileyo. Iflegi eluhlaza enikezelwe iSt. Raphael Marina Beach, kunye neGrand Resort Beach kunye neMalindi Beach (enebhara edumileyo yaseMalindi kunye nendawo yokutyela) zibekwe kufutshane nesitrato. Zonke iilwandle zicoceke ngokugqibeleleyo, zicwangcisiwe kwaye azixinani. Izemidlalo zamanzi, ii-sunbeds, ii-unbrellas, izindlu zangasese, iibhari kunye neevenkile ziyafumaneka kwisiza.
• Izinto eziluncedo kwindawo
Inani leendawo zokutyela zasekhaya, zamazwe ngamazwe kunye nokutya okukhawulezayo. I-Uptown Square eyaziwayo, kunye nokukhethwa kweebar ze-coctail ezigqwesileyo kunye neendawo zokutyela zamazwe ngamazwe, zaseJapan kunye nezamaTshayina, zikumgama wokuhamba.
Iivenkile ezithengisa ukutya, ivenkile enkulu, iibhaka, ii-arhente zokuqesha imoto kunye nekhemesti zonke zikufuphi.
Iindawo zokuqeshisa ngebhayisekile kunye nendlela yebhayisekile zikwindawo, kunye nentenetya kunye neenkundla zebhola ekhatywayo elunxwemeni.
Indlela entle yokuhamba ngaselwandle, iqala kunxweme olukufutshane kwaye ikhokelela kumbindi wedolophu yaseLimassol. Ilungele ukubaleka okanye ukuhamba kwezothando ekutshoneni kwelanga.
Inani leendawo zokuchithela iinkwenkwezi ezi-5 zikwindawo, kubandakanya iSt Raphael Resort, iGrand Resort kunye neParklane Resort Cyprus, enye yeehotele ezidumileyo kwesi siqithi.
Ukuzijonga ngokwakho, kodwa mna nomntu endihamba naye siyakuhlala silindile ukuba uyasifuna. Sitsalela umnxeba kuphela, sihlala sonwabile ukunceda ukwenza ukuhlala kwakho kube mnandi kangangoko.